मेची राजमार्गमा दुर्घटना : अर्जुनधाराका दुई जनाको मृत्यु - Bibechana Bibechana
२ माघ २०७७ १०:१० ||
बुधबारे । झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका ४ स्थित मेची राजमार्गमा दुर्घटना हुँदा बिहीबार साँझ अर्जुनधारा ७ का दुई व्यक्तिको निधन भएको छ ।
बर्ने चिया बगान क्षेत्रमा इलामबाट झापा झर्दै गरेको मे. ७ प ९४६२ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार अर्जुनधारा ७ का २१ वर्षीय कविराज भनिने कमल चौधरी र २० वर्षीय हेमा महतको निधन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ ।
साथीसँग इलामका कन्याम घुमेर फर्कने क्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय बुधबारेबाट २ किलोमिटर उत्तरमा उनीहरु सवार मोटरसाइकल टाटा सुमोसँग घुमाउरो बाटोमा दुर्घटना भएको थियो ।
इलामबाटै झापा झर्दै गरेको मे. १ ज २०९३ नम्बरको सुमोले घुमाउरो बाटोमा मोड्ने क्रममा पछाडिबाट आइरहेको मोटरसाइकलसँग ठोक्किँदा दुर्घटना भएको बताइएको छ ।
दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका दुवैलाई उपचारका लागि झापाको बिएन्डसी हस्पिटल ल्याइएको थियो । तर, ल्याउनसाथ कविराजलाई चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक राकेश थापाले बताए।
अर्जुनधारा ७ स्थित मिलडाँडा दक्षिण निवासी दुवै जनाको निधनले सिंगो गाउँ नै शोकमग्न बनेको छ । कविराज परिवारका एक्लो छोरा तथा हेमा परिवारकी कान्छी छोरी थिइन् ।
मृतक दुवैको पोस्टमार्टमका लागि मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुर लगिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
दुर्घटनामा परेको टाटा सुमोका चालक बुद्धशान्ति-७ का सञ्जय गदाल तत्काल फरार रहेकाले खोज्ने काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । तर, गाडी र धनी बुद्धशान्ति- ७ का डिल्लीमान राई इप्रका बुधबारेको नियन्त्रणमा रहेको छ ।
भद्रपुर– नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापाको ४७ औं जिल्ला सभा शनिवार भद्रपुरमा सम्पन्न भएको छ ।